Taageerayaasha kooxda Liverpool oo ku jees jeesay Everton sababa la xiriira Lucas Digne – Gool FM
(Liverpool) 01 Agoosto 2018. Kooxda Everton ayaa ku guuleesatay inay kala soo saxiixato kooxda Barcelona difaaca reer France ee Lucas Digne, wuxuuna laacibka qalinka ku duugay heshiis gaaraya ilaa iyo 2023.
Xidigii hore kooxda Barcelona ayaa sheegay kadib imaatinkiisa Everton sheegay in kooxdiisa cusub ay leedahay taariikh aad u weyn.
“Everton waa koox weyn oo leh taariikh weyn, waxaan doonayaa inaan ciyaaro, isla markaana aan dhiiri galiyo taageerayaasha tayada kubada cagta aan ciyaareyno”.
“Waxaan si fiican uga ciyaaray kooxda Roma, sidoo kale Barcelona, hormarmar balaaran ayaan ka sameeyay xirfadeyda kubada cagta, mudadii aan kasoo garab ciyaaray ciyaartoyda ugu wanaagsan kubada cagta”.
Kadib heshiiska Lucas Digne jamaahiirta kooxda Liverpool ayaa waxay bilaabeen inay ku jees jeesaan dhigooda Eveton, waxaana la ogyahay in labada kooxood ay ka dhaxeyso cadaawad soo jireen ah.
Laakiin jees jeeska jamaahiirta kooxda Liverpool ayaan ku xirneen qaab ciyaareedka Lucas Digne, laakiin waxay ku socdeen sawiro uu Digne kusoo xardhay xabadkiisa.
Digne ayaa wuxuu xawadkiisa kusoo xardhay farshaxan uu ku sheegay “Marna Kaligey ma aanan soconin” waxay u shabahdaa astaanta kooxda Liverpool ee ah “Marna kaligaa ma sacon doontid”.
Sidaas darteed jamaahiirta kooxda Liverpool oo arintan ka faa’ideesanaya ayaa waxay sheegeen in Everton ay ay la saxiixatay ciyaaryahan xambaarsan astaanta kooxdooda.